नेटबीन्स .8.2.२, यो आईडीई तपाईंको उबन्टु १.18.04.०.XNUMX | स्थापना गर्नुहोस् Ubunlog
नेटबीन्स .8.2.२, यो आईडीई तपाइँको उबन्टु १.18.04.०XNUMX मा स्थापना गर्नुहोस्
अर्को लेखमा हामी उबन्टु १.8.2.०18.04 मा नेटबीन्स .XNUMX.२ स्थापना गर्ने बारेमा एक नजर राख्नेछौं। मानौं कि अहिले सबैलाई थाहा छ, यो आईडीई हो (एकीकृत विकास वातावरण) बिभिन्न प्लेटफार्मका लागि उपलब्ध। यस कार्यक्रमको बारेमा, एक सहकर्मीले पहिले नै हामीसँग धेरै विस्तृत तरिकामा कुरा गरे अघिल्लो लेख.
नेटबीन्स आईडीईले प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै शक्तिशाली प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ जसले प्रोग्रामरहरूलाई सक्षम बनाउँदछ सजिलै अनुप्रयोग विकास गर्नुहोस् जाभा आधारित वेब, मोबाइल अनुप्रयोग र डेस्कटप। धेरै भन्छन् यो C / C ++ प्रोग्रामिंगको लागि सबै भन्दा राम्रो IDEs मध्ये एक हो। यसले PHP प्रोग्रामरहरूको लागि धेरै उपयोगी उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। आईडीई धेरै भाषाहरूको लागि समर्थन प्रदान गर्दछ जस्तै PHP, C / C ++, XML, HTML, Groovy, Grails, Ajax, Javadoc, JavaFX र JSP, रुबी र रुबीहरू जेलमा।
प्रकाशक हो सुविधा धनी र उपकरण र टेम्पलेटको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यो पनि अत्यधिक एक्स्टेन्सिबल समुदाय द्वारा विकसित प्लगइनहरू प्रयोग गर्दै, जसले यसलाई सफ्टवेयर विकासको लागि उपयुक्त बनाउँदछ।
समाधान: उब्न्टु तार बिना वा वाइफाइ इन्टरनेट जडान बिना
Netbeans यो उबन्टु भण्डारहरूमा उपलब्ध छत्यसो भए, यदि हामी एक सजिलो तरीकामा स्थिर संस्करण प्राप्त गर्न चाहान्छौं भने हामीले केवल उबन्टु सफ्टवेयर विकल्पमा जानुपर्नेछ। त्यहाँ एकचोटि हामीले केवल नेटबीन शब्द खोज्नुपर्नेछ र "स्थापना गर्नुहोस्" बटन थिच्नु पर्छ। यसको विपरीत यदि हामी चाहन्छौं नयाँ र कस्टम संस्करण स्थापना गर्नुहोस्, हामी यसलाई म्यानुअली गर्न सक्छौं। यस लेखमा हामी आज कसरी नेटबीन्सको भर्खरको संस्करण स्थापना गर्ने भनेर हेर्ने छौं, जुन 8.2.२ छ। म यो स्थापना उबन्टु १.18.04.०XNUMX मा गर्न जाँदैछु, यद्यपि यो डेबियन र लिनक्स मिन्टमा पनि गर्न सकिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, हामीले स्पष्ट गर्नु पर्छ कि नेटबीन्सको संस्करण install.२ स्थापना गर्न हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा केही आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। पहिलो त्यो हो न्यूनतम २ जीबीको र्याम आवश्यक छ। र हामीले हाम्रो टोलीमा जाभा एसई विकास किट (JDK) 8. राख्नु पर्छ। यो आईडीई स्थापना गर्न आवश्यक छ। नेटबीन्स .8.2.२ जेडीके with सँग चल्दैन, र त्यसो गर्दा त्रुटिहरू हुन सक्छ.
1 जाभा JDK 8 स्थापना गर्नुहोस्
2 उबंटु १.8.2.०18.04 मा नेटबीन्स आईडीई .XNUMX.२ स्थापना गर्नुहोस्
3 नेटबीन्स स्थापना हटाउनुहोस्
जाभा JDK 8 स्थापना गर्नुहोस्
एक सहकर्मीले यसबारे हामीलाई पहिल्यै बताइसकेका छन जाभा को बिभिन्न संस्करण को स्थापना हाम्रो उबन्टु प्रणालीमा। हामीलाई चाहिएको जाभा J JDK संस्करण स्थापना गर्न, हामी पहिले हाम्रो सिस्टममा वेबअपडी te टिम / जाभा पीपीए थप्नेछौं। त्यसो गर्न, हामी टर्मिनल खोल्छौं (Ctrl + Alt + T) र टाइप गर्नुहोस्:
एक पटक हाम्रो सफ्टवेयर लिस्टि added थप र अद्यावधिक भएपछि, हामी प्याकेजहरू खोजी गर्नेछौं oracle-java8 नामको प्याकेजहरू तल देखाईएको रूपमा र स्थापना समाप्त:
यदि तपाइँको प्रणालीमा एक भन्दा बढि जाभा स्थापना गरिएको छ भने, तपाईं जाभा set लाई पूर्वनिर्धारितको रूपमा सेट गर्न oracle-java8-set-default प्याकेज स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ:
उबंटु १.8.2.०18.04 मा नेटबीन्स आईडीई .XNUMX.२ स्थापना गर्नुहोस्
अब तपाईको मनपर्ने ब्राउजर प्रयोग गरी, जानुहोस् IDE डाउनलोड पृष्ठ र पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् नेटबीन्स स्थापनाकर्ताबाट।
तपाईं आफ्नो प्रणालीमा नेटबीन्स स्थापनाकर्ता लिपि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ विजेट उपयोगिताको माध्यमबाट। यो गर्न हामी टर्मिनल खोल्छौं (Ctrl + Alt + T) र लेख्नुहोस्:
एकचोटि डाउनलोड पूर्ण भएपछि, काम गर्ने डाइरेक्टरीमा यदि हामी विजेट प्रयोग गर्छौं वा जहाँ हामीले ब्राउजरबाट डाउनलोड बचत गर्छौं, तब हामी नेटबीन्स स्थापनाकर्ता भेट्टाउनेछौं। अब निम्न कमाण्ड प्रयोग गर्दै, हामी स्क्रिप्ट कार्यान्वयन योग्य बनाउँछौं। ठीक हामी स्थापना पछि सुरू गर्नेछौं।
माथिका आदेशहरू चलाएपछि, स्थापनाकर्ता 'स्वागत विन्डो' देखा पर्नेछ। हामी जारी राख्नको लागि अर्को क्लिक गर्नेछौं (वा अनुकूलन क्लिक गरेर आफ्नो स्थापना अनुकूलन गर्नुहोस्) र स्थापना विजार्डको अनुसरण गर्नुहोस्।
त्यसो भए हामीले गर्नु पर्छ लाईसेन्स सम्झौतामा सर्तहरू पढ्नुहोस् र स्वीकार्नुहोस्। हामी अर्को क्लिक गरेर जारी राख्छौं।
तपाईं अघिल्लो स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुन्छ, हामी छनौट गर्नेछौं नेटबीन्स आईडीई .8.2.२ स्थापना फोल्डर र हामीसँग JDK स्थापना भएको फोल्डर। हामी अर्को क्लिक गरेर जारी राख्छौं।
स्क्रिनमा जुन हामीले अहिले देख्छौं, हामी पनि छान्छौं GlassFish सर्वर स्थापना फोल्डर। पहिले जस्तै, हामी अर्को क्लिक गरेर जारी राख्छौं।
अर्को स्क्रिनमा, जहाँ स्थापना सारांश देखाइन्छ। यहाँ हामी स्वचालित अपडेट सक्षम गर्नेछौं चेकबक्स मार्फत स्थापना गरिएको add-ons को लागि। अब हामी स्थापना क्लिक गर्न स्थापना क्लिक गर्नेछौं।
जब स्थापना पूरा हुन्छ, हामीले केवल समाप्तमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। अब हामी नेटबीन्स आईडीईको मज्जा लिन सक्छौं। हामीले भर्खर यसलाई हाम्रो कम्प्युटरमा खोज्नुपर्दछ र लन्चरमा क्लिक गर्नुपर्दछ।
नेटबीन्स स्थापना हटाउनुहोस्
यस कार्यक्रम हटाउनु धेरै सरल छ। हामीले केवल फोल्डरमा जानुपर्नेछ जुन हामीले स्थापनाको लागि चयन गर्नुभयो। त्यहाँ एक पटक हामी भेट्नेछौं अनइन्स्टल .sh नाम गरिएको फाइल। हाम्रो टोलीबाट आईडीई पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि यो फाईल हो। टर्मिनलमा (Ctrl + Alt + T) हामी केवल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, फोल्डरबाट स्थापना हटाउने फाइल अवस्थित छ:
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » नेटबीन्स .8.2.२, यो आईडीई तपाइँको उबन्टु १.18.04.०XNUMX मा स्थापना गर्नुहोस्
यस्तो राम्रो विवरणको लागि धन्यवाद। यो आश्चर्य कार्य गर्दछ।
Cesar G. रिवास भन्यो
नमस्कार, तपाईको योगदानका लागि धन्यवाद, मैले सबै चरणहरू गरेँ, तर जब म प्रोग्राम खोल्छु यसले कुनै पनि परियोजना वा कुनै फाईल, वा अरू केही खोल्दैन, म यसको बारेमा के गर्न सक्छु?
Cesar G. Rivas लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार नेटबीन्सको स्थापना हटाउन प्रयास गर्नुहोस् र "सबै" संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि यसले अझै तपाईंको लागि काम गर्दैन भने जाभाको अर्को संस्करण स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् (र यसलाई तपाईंको प्रणालीमा पूर्वनिर्धारितको रूपमा सेट गर्नुहोस्)। Salu2।
मित्रले नेटबीन्स install.२ सबै स्थापना गर्दछ र मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ नेटबीन्स चल्छ तर नयाँ प्रोजेक्ट बनाउन बटनले केही गर्दैन, यसले मित्र सिजरको समान मोड्युलहरू खोल्दैन।
अर्को कुरा, म स्थापना गरेको JDK अनप्याक गर्न सक्दछु?
मेलोफ १० भन्यो
हेलो नेस्टर, म तपाईंलाई एउटा भिडियो छोड्न जाँदैछु कि यदि तपाईंले उनलाई पत्रमा पछ्याउनु भयो भने तपाईंले समस्या समाधान गर्नु हुनेछ, मूल रूपमा यो जाभाको संस्करण नेटबियन्समा तोक्ने बारेमा हो जुन तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हो, जुन तपाईंले स्थापना गर्नुभयो तपाईंको ओएसमा यो मैले महसुस गरे कि उही आईडीईले तपाईंलाई स्थापनामा यो निर्दिष्ट गर्न को लागी सम्भावना दिन्छ। यहाँ भिडियो:
Melof10 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार साथीहरु, मैले युबन्टु स्टोरबाट रोकिदिएँ र त्यहाँ मैले नेटबीन्स भेट्टाएँ। जहाँसम्म पनि, मलाई एक त्रुटि भयो र म वेबमा गएँ र मैले यी टर्मिनल कोडहरू फेला पारे र अब म यसलाई डाउनलोड गर्दैछु 😉
यो लिंक हो:
DresF लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद मेरो साथी !!
कमाण्ड चलाइरहेको छ sudo apt-get oracle-java8-इंस्टॉलर स्थापना गर्नुहोस् यसले मलाई यो देखाउँदछ
Oracle-java8- स्थापनाकर्ता प्याकेज उपलब्ध छैन, तर केहि अन्य प्याकेज सन्दर्भहरू
लाई। यसको अर्थ प्याकेज हराइरहेको, अप्रचलित वा केवल हराइरहेको हुन सक्छ
केहि अन्य स्रोतबाट उपलब्ध छ
viridiana solis भन्यो
नमस्ते केहि यस्तो भयो जुन मलाई भयो, मैले के गरे
apt खोज jdk
sudo apt स्थापना गर्नुहोस् openjdk-8-jre
sudo apt openjdk-8-jdk स्थापना गर्नुहोस्
Viridiana solis लाई जवाफ दिनुहोस्
काकुने, भिमको विकल्पको रूपमा एक राम्रो कोड सम्पादक